‘समाजवाद उन्मुख बाटोमा पलाँता’ | नेपाली पब्लिक ‘समाजवाद उन्मुख बाटोमा पलाँता’ | नेपाली पब्लिक
‘समाजवाद उन्मुख बाटोमा पलाँता’
नेपाली पब्लिक २०७६, २७ श्रावण सोमबार ०९:११
कालीकोट – जिल्लाको पलाँता गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण बम ‘पलाँती कान्छा’ ले आफ्नो गापा समाजवाद उन्मुख बाटोमा हिँडिरहेको दाबी गरेका छन्।
नेपाली पब्लिक डटकमसँगको कुराकानीमा उनले समाजवादका न्यूनतम मान्यताहरूलाई अवलम्बन गर्दै गापालाई समाजवादको बाटोमा हिँडाउने लक्ष्यका साथ आफूले काम गरिरहेको बताए।
स्व. बुवा ऐवान बम र आमा नौरता बमका कान्छा सन्तानका रूपमा २०४३ सालमा जन्मिएका अध्यक्ष बमले स्नातकसम्मको शिक्षा हासिल गरेका छन्। सानै उमेरदेखि परिवर्तनका पक्षधर बम आजको दिनसम्म आइपुग्दा समाजले आंशिक परिवर्तन हासिल गरेको स्वीकार गर्छन्।
सङ्घीय सरकारले आगामी ७ वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, अध्यक्ष बमले पलाँता गाउँपालिकालाई निजी विद्यालयमुक्त बनाएका छन्। जिल्लाको अति विकट मानिने पालाँता शिक्षामा निकै नाजुक र पछि परेको अवस्था थियो। अध्यक्ष बम भन्छन्, ‘हाम्रो गापा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता महत्त्वपूर्ण कुरामा निकै पछि थियो। आज हामीले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा नीति कार्यान्वयन गरेका छौँ, गापाका सम्पूर्ण स्कुलमा कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गरेका छौँ।’
उनले अगाडि थपे, ‘अनिवार्यबाहेक अन्य शुल्क नउठाई कक्षा १२ सम्म अध्ययन भइरहेको छ। तर, यो वर्ष पूर्णरूपमा निःशुल्क बनाउने हाम्रो कार्यक्रम छ। शहीद परिवार, घाइते परिवार र विपन्न विद्यार्थीका लागि आवासीय विद्यालयको स्थापना गर्ने क्रममा हामी छौँ। गापाको वडा नम्बर ९ मा रहेको सरस्वती माविलाई आवासीय विद्यालयका रूपमा विकास गर्दैछौँ।’
अध्यक्ष बमका अनुसार आगामी दशैँसम्म पलाँता गाउँपालिका अँध्यारोमुक्त हुँदैछ। गापाभित्र चारवटा लघुवित्त योजना सञ्चालनमा छन्। दुर्सीखोला लघुवित्त योजना, औलाखोला, दामीगाड, मुचिखोला लगायतका खोलाबाट विद्युत् निकालेर गाउँपालिका उज्यालो बन्दैछ।
दुर्सीखोला (१ सय किलोवाट), औलाखोला (७० किलोवाट), दामी गाड (२३ किलोवाट), दामी गाड–२ (१७ किलोवाट निमार्णाधीन), भूचिखोला (३२ किलोवाट निमार्णाधीन) विद्युत् आयोजना सञ्चालन हुँदैछन्।
सडक सञ्जालमा जोडिँदै पलाँता
गापाभित्रका सबै वडालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने काम भइरहेको अध्यक्ष बमले बताएका छन्। उनका अनुसार वडाभरिको सडक सञ्जाल ७२ किलोमिटर छ। हाल ४५ किलोमिटर सडक निर्माण भइरहेको छ। निर्माण दल गठन गरेर काम भइरहेको र दलमा संलग्न एक सय जनालाई दिनको ८ सय रुपैयाँ ज्याला दिने गरिएको छ।
सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास गर्ने र जनतालाई सिंहदरबार गाउँमा पुगेको महसुस गराउने गरी काम भइरहेको अध्यक्ष बमको दाबी छ। यो वर्ष ५५, अर्को वर्ष २४ जना निर्माण दलमा भर्ना गर्ने उनको योजना रहेको छ।
पालाँता गापामा सार्वजनिक यातायातको सन्दर्भमा यहाँ निजी सवारीसाधन चल्ने छैनन्। यसो गर्नुको कारण के हो नि? भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘हाम्रो संविधान समाजवाद उन्मुख छ। त्यसैले हामी पनि समाजवाद उन्मुख बाटोमा हिँड्नुपर्छ। जनतालाई राज्य हुनुको महसुस गराउनु छ।’
उनले भने, ‘गापाको सार्वजनिक गाडी भयो भने निश्चित समयमा गाडी चल्छ। एक/दुई जना मात्रै भए पनि उनीहरू गन्तव्यमा पुग्छन्। यसका लागि १२ जना युवालाई हामीले नेपालगञ्जमा ड्राइभिङको तालिम सिकाइरहेका छौँ। व्यक्तिगत स्वामित्वलाई सामाजिक स्वामित्व प्रदान गर्ने र निजी क्षेत्रलाई आवश्यक क्षेत्रमा सीमित राख्ने उद्देश्यले यो काम गरिँदैछ।’
स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा पलाँता
गापामा १५ शय्याको सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माणको काम भइरहेको अध्यक्ष बमले बताएका छन्। उनले भने, ‘संंविधानअनुसार निर्माण हुनुपर्ने उक्त अस्पतालको केन्द्र सरकारले अझैसम्म पनि डीपीआर तयार गरेको छैन। निर्माण हुन केही समय लाग्ने अवस्था छ। हामीले यही आउँदो दशैँभन्दा पहिले निर्माण सक्ने गरी ‘चाइना प्लाइऊड’का सामग्रीहरू मगाएका छौँ। भूकम्प प्रतिरोधी भवनसँगै स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छौँ।’
चाइना प्लाइऊड’का सामग्रीहरूबाट बन्ने संरचनाको आयु कम्तीमा २० वर्ष हुने अध्यक्ष बमको भनाइ छ। अस्पतालका लागि दुई जना विशिष्ट रोग विशेषज्ञसहित अन्य एचएसम्मका १९ जना कर्मचारी रहनेछन्। अहिले गापामा स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिनको दुई घन्टा गाउँमा गएर जनताको स्वास्थ्य अवस्था जाँच्ने गरिरहेका छन्। ३० जना स्वयंसेविकाले गाउँसँगै हरेक शुक्रबार प्रत्येक स्कुलमा गएर विद्यार्थीको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी लिइरहेका छन्। अध्यक्ष बमले एक/दुई वर्षभित्र गापाभित्र निजी स्वास्थ्य क्लिनिकमुक्त बनाउने बताए।
कृषि, वन तथा खानेपानीमा पलाँता
पलाँताको बस्ती रहेको स्थान सुक्खा र उजाड जस्तै छ। प्राकृतिक रूपमा समेत ठगिएको गापालाई हरियाली बनाउने उद्देश्यका साथ आफू लागिपरेको अध्यक्ष बमको भनाइ छ। यस वर्ष मात्रै २ लाख बिरुवा रोपिएको उनले बताए।
अध्यक्ष बमका अनुसार गापामा ‘एक वडा एक नर्सरी’ कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। प्रत्येक घरमा १० वटा बिरुवा रोप्नैपर्ने निर्देशन दिइएको छ। गापामा ३२ वटा सिँचाइ पोखरी निर्माण भएका छन्। त्यस्तै गापाभित्र ४२ वटा सार्वजनिक वन छन्। प्रत्येक वनमा हरेक वर्ष १ हजार बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष बमले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार प्रत्येक वनमा पोखरी निर्माण गरिएको छ।
नेपाली पब्लिक डटकम
लक्ष्मण बम (पलाँती कान्छा)